Amanyala am 2 – Izindaba Zokubhebhana
Amanyala am 2
Posted on February 18, 2022 | ZekwaMzeki | No Comments |
Kungolwesihlanu emini 2013 ndivela emsebenzini itsheri yam ayikho for the weekend. Ndimfonele umjita uMonwai wam kuba ndifunusela. Ndihlala ndisafe xandinaye and ubaby uyamazi. Athi umjita masihlangane eCircus Triangle xephuma ngo6 mna ndiphuma u3 Friday’s.
Ndim lo uvasayo ndizithi Chino ebottle Green, white t-shirt and white takkies denim jacket kwiback pack ndiyokhwela itaxi. Ndifike 5 past 6 akakaphumi umjita xandisithi kuvuliwe ebottle store ndithenge iChivas neTizer ndibuyele eCircus Triangle. Abesephuma umjita wam athi masiyokhwela kwipanel van eqhutywa ngumnganakhe. Sakhwela Saya eMthatha dam kwabe kukho imbhadla yomnyumjita endimaziyo. Kamnandi konwatywa ndanxila ndayipapa ndalaliswa eback kulevan.
Ndizokothuswa ndishunyiswa ekseni ngabo past 4 ubamasingene kuleBnB afikele kuyo umjita we an igama lake nguLukho. Hayke ndivuke ndingene but ndabe ndingasanxilanga kakhulu ndithe futhu nje kamnandi. Zingenise utywala ezam, 2 bottles necase yesmirnoff Double Black (Guarana) andazi noba zivelaphi ndiyoxukuxa ndibuye xabelayta izoli. Ndinikwe ndizbethe kuyo nam, sasela sithe chuuuuu kwazothi pha ngoo10 ksasa ndibuve buhla ngemilenze and ndibawela uLukho. Utywala nezol not a good mix batshana yhoooo. Xasisithi iphelile leCider bathi masambeni sonke siyothenga, ndingavumi ndicela uMonwai uba aye yedwa coz ndifunuthetha noLukho. Aqhankqalaze but aphethe ehamba. Silayte izoli silumele ngeshot nenkawza.
Ndivele ndiqinisbindi ndiba be ipipi kaLukho ndimvale umlomo ngomnwe, wathula uswayni. Ndayikhupha ndayithi mlomo ndaqala ngentloko ndiyidlalisa ngolwimi wancwina umfana, ndehla nayo langalo yosana ndayimunca ndabe ndidlala ngamasende akhe. Xandimjonga ebusweni uwavale mbaa amehlo, undibambe nkqi intloko, ibrukhwe yakhe isemaqatheni. Wandichamela emlonyeni ndakhuphela apho zivela khona.
Ndathi ndisayovasa ndakhulula ndangena kwishower, ndacinga is hot yam ndayoyithatha. Xandifika yo uLukho uyabhuqa in his bag uyathukisa ipipi ime nkqo. Ndibuze uba ukhangela ntoni athi iicondoms. Ndimhleke xesithi akanazo masenze without zona ndingavumi ndithathe ishot yam ndiyovasa xandiphuma nanko uLukho eme emnyango efaka icondom ndavela ndarhala.
Wandiguqula wandoyamisa ngesink enclose to umnyango wayifaka yonke yanqandwa ngamasende wandizeka slowly kamnandi isandla esiy1 sisebeleni esinye sidlala nekhozo. Ndachama ka2 Wandiguqula wandibeka kwisame sink ngeempundu wathi mandiyjonge xeyfaka, wamane efaka itip andibuze uba ndiyayifuna na ndingamhoyi ndavela ndathi xesafaka incam ndavela ndamgweqa ezantsi kwempundu ngeenyawo ndamqinisa nkqii ndafamtsala isinqe yangena yonke. Ndamfetsha okwam kukhala uphaxaphaxa.
Xandijonga emnyango eroomini uMonwai nomnye umjita endingayaziyo basibukele bayaziphehla. Xandikbona iisize zezapipi Ndachama same time. Wachama uLukho ndathi mna ndinxaniwe. Yeza ibaleka icider ndasela wathetha ican uMonwai awgqiba wandingqengqisa ngomqolo wazama undiphuza andavuma. Ndathi khanditye okwesfebe coz ur never getting lechance again. Wathi zendingakhali ke. Wafaka icondom kwalaytwa izol bathi makuqale mna bandithi shot. Wandibeka ekoneni yebhedi umjita wayifaka engangxamanga tu, ndachama esayfaka ndancwina yangena ipipi emlonyeni hayke ndazekwa macala. Ndazama ukhala ipipi yabe indizeka umlomo. Wachama umjita uMonwai engekachami.
Wangqengqa ngomqolo uMonwai wathi mandizitye ngayo, ndakhwela ndamzeka kanobom encwina oko. Ndeva ngepipi isoyama endutswini ingasebuhlungu phofu uyazeka uMonwai akayekanga. Ndatyiwa ndabatywa nam kwade kwabetha u12 oko sityana sisela.
Bayakwazi uzeka abafana bamampondo andinamoya. Any challengers ndiseGqeberha ngoku.
Post Navigation ← SizakalaInjabulo kwiNkomo blog →